Apple Watch Taxanaha 7 - Loogu talagalay Sida IPhone 12 | TeraNews.net
Apple Watch Series 7 - iPhone 12-naqshad naqshadeysan
qoraaga Kravetz Pavel La daabacay 08.12.2020
Daahfurka taleefanka gacanta ee Iphone 12 ayaa muujiyay in shirkaddu wali leedahay nashqadeeyayaal. Ka dib oo dhan, muddo intaa le'eg, sii deynta isla noocyada taleefannada ayaa aad u daallan. Xitaa isku ekaanshaha qalabka ee leh iPhone 4 ma jebin idyll. Iibsadayaashu si wanaagsan ayey u salaameen badeecada cusub, iyadoon loo eegin waxa ay ku qoreen bogagga wararka iyo shabakadaha bulshada. Waxaa jira baahi, iibka sidoo kale waa tilmaamaha ugu weyn ee soo saaraha.
Laakiin saacaddu isma beddelin naqshadeeda tan iyo taariikhda la soo bandhigay Apple Watch Series 4. Midabada cusub, qalabka - haa. Naqshadduna waa isku mid. Iyo, sida uu sheegayo naqshadeeyaha Wilson Nicklaus, sheeko aad u xiiso badan ayaa ina sugeysa. Taxanaha Apple Watch 7 - naqshadeynta qaabka IPhone 12. Wax walba waxay ku egyihiin muuqaalada sawirada - qaabka saacadu xitaa wuu ka adagyahay. Sida saxda ah casriga cusub.
Ka dib markii sawirada la soo dhigay baraha bulshada, Apple waxaa soo gaadhay faallooyin badan oo xun. Qiyaastii 80% dadka isticmaala waxay ku riyoodaan Apple Watch oo leh wareeg wareeg ah. Tusaale ayaa la siiyaa Huawei Watch GT2 Protaas oo ka maqan xakamaynta macruufka caadiga ah iyo shaqeynta ugu habboon. Hase yeeshe, isticmaale kasta oo 2aad wuxuu ka cawdaa cunsuriyadda Apple Watch Series 6 marka la eego korontada. Maalin iyo badh maahan wax culus.
Qiyaasta dhinaca shaashadda 16: 9 mar dambe ma khusayso
Harry Potter (Harry Potter): iibsi guul leh
LG 32GK650F-B kormeeraha ciyaaraha: dulmar guud
Haysta taleefanka magnetic UGREEN